MSEBENZI Igama leNkcazelo kunye neNtsapho yeMbali
Lithini Igama Lokugqibela Lefebvre?
Ukufunyanwa kwegama lesiFrentshi elithi Fevre, elichazwe ngumsebenzi wesinyithi okanye umsizi, uLefebvre uvela kwi-Old French fevre , echaza "umenzi wezandla." Amagama angamaFrentshi afana nawo afaka uFrre, uFaivre, uFaure kunye neLèvre. I-Lefebvre yi-French efanayo neyesiNgesi iSITHITHI.
Igama Lenye igama : I- LEFEBVRES, LEFEVRES, FAVRES, FEBVRE, FEBVRES, FAVRE, LEFABRE, LEFABRES, LEFEVRE, LEFEUVRE, LEFEUBRE, FABER, LEFEBURE
Abantu abaPhezulu ngegama le-LEFEBVRE
UHenri Lefebvre - isazi sefilosofi saseFrench nesiXhosa
UMarcel François Marie Joseph Lefebvre - umbhishobhi omkhulu wamaRoma wamaRoma
UJames Kenneth "Jim" Lefebvre - owayesakuba ngumdlali webhola ye-baseball ye-MLB, umphathi kunye nomqeqeshi; umculi weTV
UArthur Henry Lefebvre - ososayensi waseBrithani kunye nenjini
URené Lefebvre - umnini-mveliso waseFransi; esebenzayo ekuchaseni kweFransi
UFrançois Joseph Lefebvre - i-French marshal ngexesha leemfazwe zaseNapoleon
Uphi igama le-LEFEBVRE igama eliqhelekileyo?
Ngokubanjiswa kwebheno kwi-Forebears, iLefebvre yenye yegama eliqhelekileyo kwiFransi, ukubeka njengegama le-17 elisetyenziswa rhoqo kwilizwe. Kukwaqhelekileyo nakwamanye amazwe kunye nabemi abathetha isiNgesi, kuquka iKhanada, iNew Caledonia kunye neBelgium.
I-WorldNames PublicProfiler isitshela ukuba iLefebvre ifumaneka kakhulu kwiNtlabathi yeFransi, ngokukodwa kumasebe e-Eure, i-Seine-Maritime, iSomme, iPas-de-Calais kunye neNorthern.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name LEFEBVRE
Ukuba ungomnye wabantu abaye baphephezela ukuhlaziya kwisizukulwana sakho saseFransi ngenxa yokwesaba ukuba uphando luya kunzima, ungalindelanga!
IFransi lizwe elinemiqulu ebhaliweyo yobuhlanga, kwaye kuya kwenzeka ukuba uya kukwazi ukulandelela izimpande zakho zaseFransi emva kwezizukulwana eziliqela emva kokuba uqonda ukuba kwaye zigcinwa phi iirekhodi.
I-Lefebvre Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengekhaya laseLefebvre okanye ingubo yeengalo kwifayile yeLefebvre. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-LEFEBVRE I-Forum yoGubulo loLuntu
Ibhodi lemiyalezo yamahhala igxile kwinzala yeLefebvre okhokho emhlabeni jikelele.
I-FamilySearch - LEFEBVRE Genealogy
Hlola iziphumo ezingaphezu kwama-500,000 ukusuka kwiirekhodi zomlando ezichongiweyo kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca enxulumene nomgca weLefebvre kule webhsayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
LWEBENZISA Igama loLuhlu lweeNcwadi
Uluhlu lwamagama othumelelweyo lwabaphandi befayile yeLefebvre kunye nokuhluka kwawo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwe ngophawu lwemiyalezo edlulileyo.
DistantCousin.com - LEFEBVRE Umlando WezobuGalobele & Yentsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Lefebvre.
I-GeneaNet - Iirekhodi zeRefebvre
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweenkcukacha, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomnxeba weLefebvre, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-Lefebvre Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zoobuhlanga kunye neembali zabantu ngabanye ngefayile yeLefebvre kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
Izakhiwo zeMichiza eziqala ngeNcwadi u-U
Iimida ezine zeMhlaba
Inqwelwana yeKlabhu ephumayo: I-Major Championship Site kunye ne-PGA Tour Golf Course
Funda Ukunyathela Umbhobho Omnyama Wombhobho Ngamabala
I-9 yePiano Chords
UGeorge Perkins Marsh Uxelwe kwiNdawo yokuLondolozwa kweNxweme
Ngo-1989 - iManhattan Alien Abduction